true children /zu-ZA/tools-for-life/children/steps/how-to-live-with-children.html read 1 7 /tools-for-life-furl/imagecache/cropfit@w=3000/data/scientology-courses/files/certs/children_zu_ZA.jpg Izingane
Uyemukelwa kwi-Online Course Yezingane
Emhlabeni wanamuhla, iningi labazali alinikeziwe izifundiso zokukhulisa izingane zabo. Abazi ukuthi bazobanakekela kanjani, babasize kanjani lapho belimele, ukuthi bengabaduduza kanjani lapho becasukile futhi bekhala okanye bengenza kanjani ukuthola ukubambisana kwengane.
Njengomphumela, izingane zanamuhla zivame ukukhuliswa ngendlela abazali babo abakhuliswe ngayo ngabazali bazo; nokuthi, ezimeni eziningi, kwakungeyona into emnandi noma isipiliyoni esiyimpumelelo.
Indlela onakekela futhi okhulisa ngayo ingane inomthelela omkhulu ekusaseni lakhe. Isibonelo, uma ingane ithola uthando oluningi nokuxhumana kubazali bayo, kungenzeka ukuthi ifune ukubuyisela lolo thando nokukhulumisana nomndeni wayo. Kepha uma ehlala enikezwa imiyalo, ngokuqhubekayo emiswa ekwenzeni lokho afuna ukukwenza futhi angenele izimpikiswano nokulwa nabazali bakhe, ngeke alinde ukuba kude nekhaya. Imvamisa, lapho ephuma ekhaya kanjalo, angakha ubungane nabantu abangafanele futhi aqale ukwenza izinto ezingamfaka enkingeni.
U-L. Ron Hubbard usungule izindlela eziningi zokukhipha okungcono kakhulu enganeni—ukumsiza ukuthi abeke izinyawo zakhe phansi futhi amnikeze ubuntwana obujabule lapho ekhula njengelungu lomndeni elifaka isandla. Ngenkathi ingxenye nje yalokho okwabhalwa ngu-L. Ron Hubbard ekusebenzeni kwezingane kufakiwe lapha, lesi sahluko sikunikeza amathuluzi awusizo futhi sikufundisa izindlela zokusiza ingane yakho engatholakali kwenye indawo.
Imininingwane ekulesi sifundo izokusiza ukukhulisa izingane zakho ngothando nokuxhumana futhi ubanikeze abakudingayo ukubenza bajabule, babe nothando futhi babengamalungu athelayo omndeni wakho—izingane ezizokhula zibe ngamalungu abalulekile omphakathi wethu wakusasa.
Ngokuvamile abazali bayazibuza, “Ngingenzenjani ukukhulisa izingane zami kangcono?”
Umzali omuhle, ozinzile onothando nokubekezelela (ukuzimisela ukwamukela okuthile okungaphelele) enhlizweni yakhe uyinto enhle kakhulu ingane engaba nayo.
Into yokuqala futhi ebaluleke kunazo zonke ekwazini ukukhulisa izingane zakho ukuthi ungaziqeqesha kanjani ngaphandle kokubaphula (ukubalimaza ngokwemizwa ukuze balahlekelwe yithemba noma ukuzethemba). Ufuna ukukhulisa ingane yakho ngendlela yokuthi akwazi ukuzinakekela futhi akumele umlawule njalo. Ukuziphatha kwakhe okuhle, impilo yakhe kanye nenjabulo yakhe kuncike kuwe ekwenzeni lokhu ngokufanele.
Izingane akuzona izinja. Azikwazi ukuqeqeshwa njengezinja. Ingane akulona uhlobo olukhethekile lwesilwane oluhlukile kuMuntu. Ingane yindoda noma ngowesifazane ongakakhuli ngokuphelele.
Ungathanda ukuhudulwa ngamandla futhi u-oda ngakho futhi uvinjelwe ekwenzeni lokho ofuna ukukwenza? Ubungazizwa uthukuthele futhi ucasukile uma umuntu enza lokho kuwe. Ngokunjalo nengane, kepha ngoba incane, yesaba ukusho noma yenze noma yini ukukhombisa ukuthi ayikuthandi okwenzeka kuye. Kepha leyo yindlela ingane eyisilinganiso ephathwa ngayo. Ingane ayilwi nayo ngoba ayikhulile ngokwanele futhi iyakwazi lokho. Ngakho-ke esikhundleni salokho wenza izinto ezifana nokwenza ukuthi phansi kube nodaka, aphazamise ukucambalala kwakho futhi aqede ukuthula ekhaya lakho. Lokhu ukuziphatha kwengane okujwayelekile. Kepha akufuneki kube ngaleyo ndlela.
I-self-determinism kusho ukuthi umuntu unokhetho futhi anganquma ukuthi kwenzekani kuye, lokho afuna ukukwenza, njalonjalo. Lapho umuntu ene-self-determinism, ubuye abe nokuzethemba ngokulawula kwakhe izinto eziseduze naye nasekusebenzelaneni kwakhe nabanye abantu. Zonke izingane zinelungelo le-self-determinism.
Ubumnandi nothando bomntwana buzoqhubeka inqobo nje uma engaba ne-self-determinism. Uma uphazamisa le-self-determinism, uphazamisa impilo yakhe.
Isizathu esisodwa okungadingeka ukuthi uphazamise ilungelo lengane lokuzinqumela ukuthi kungaba yilapho kuba nengozi ethile endaweni eseduze kwakhe. Kulokhu, wena njengomzali wakhe kufanele wenze indawo ahlala kuyo noma adlala kuyo ingabi nazo izinto ezingamlimaza. Ukwenza isibonelo, ungakha uthango egcekeni lakho ukuze ingane yakho ingakwazi ukungena emgaqweni.
Abanye abantu bakhuliswe kabi ebunganeni babo kangangokuba bacabanga ukuthi ukulawula kuyinto ebaluleke kakhulu ekukhuliseni ingane. Kepha uma ulawula ingane ngamandla, uzomenza ukuba anganaki, okuwukuzizwa lapho engasenandaba ngalutho. Uzobe elalela futhi enza lokho umtshela kona, kepha uzobe elahlekelwe I-self-determinism yakhe futhi ngeke abe ingane ejabule.
Ngakho-ke, ekukhuliseni ingane yakho, kufanele ugweme “ukuyiqeqesha” ngale ndlela. Ingane yakho iqala ngempela impilo yayo ibe nobungani futhi yamukeleke kwabanye abantu. Futhi ngokwemvelo uzoziphatha ngendlela ezolile futhi azuze inhlonipho. Kepha esikhathini esifushane, uma engaphathwa kahle, ingane iyovukela (iphikisana negunya). Lokhu kudlubulunda kungahle kube kubi kakhulu aze adale izinkinga eziningi. Kungenzeka enze umsindo omningi futhi enze izinto ezikhombisa ukuthi akabakhathaleli abanye abantu. Angangaba nandaba nempahla yakhe noma azenze ongcolile futhi angahlambi. Uzokwenza noma yini ukuze akucasule.
Ngakho-ke uma uzama nje ukuqeqesha nokulawula ingane, uzolahlekelwa uthando lwakhe. Futhi uma uqhubeka nokulawula nokuqeqesha ingane yakho, ungagcina ulahlekelwe yingane unomphela.
Nakhu ukuhlolwa ongakwenza: Vumela ingane yakho ihlale ethabgeni lakho. Uzohlala lapho, ejabule impela. Manje beka izingalo zakho kuye futhi umbambe ukuze umenze ukuba aqhubeke nokuhlala lapho. Yenza lokhu yize noma wayengazamanga nokuhamba. Masinyane, uzokuqinisa. Uzolwa ukuze asuke kuwe. Uzothukuthela. Uzokhala. Kepha khumbula, wayejabule ngaphambi kokuba umbambe nokumenza ukuba ahlale lapho.
Yimizamo yakho “yokuqeqesha” nokulawula ingane yakho ezomenza abhikishe futhi enze njengoba enza njengoba uzama ukumbamba ethangeni lakho.
Uma usuvele waqeqesha, walawula, wayala nxazonke futhi wamisa ingane yakho ekubeni nezinto zayo nezinto ezinjalo isikhathi esithile, ungaba nobunzima lapho uqala ukumvumela ukuthi enze okuthile. Uma, ngemuva kokumlawula, uzama ukumnika inkululeko, angahle asole futhi abe nobunzima ezama ukujwayela lokhu.
Yithi ubehlezi evinjwa nguwe ukuthi avele agibele ibhayisekili ngoba kungenzeka alimale. Ngemuva kwalokho uzomnikeza ibhayisekili bese umtshela ukuthi aligibele. Kwakuzomthatha isikhathi eside ukuthi alawule amandla okuphoqwa ngaphambilini futhi akwazi nje ukugibela ibhayisekili.
Uma uvumela ingane yakho ukuba ibe ne-self-determinism ukuzakhela yona futhi yakhe ukuzethemba kwayo futhi ungazami njalo ukuyiqeqesha nokumlawula, izokwenza kahle. Futhi uma nje usebenza nengane yakho kanjena, uzogcina usunomntwana onomusa, oziphethe kahle ocatshangwa nguwe. Futhi, okubaluleke kakhulu, uzoba nengane ekuthandayo.
Kulula kakhulu futhi kuningi, kungcono kakhulu enganeni uma ungamniki imiyalo nezikhombisi-ndlela ezingapheli, kepha umsize azihlakulele i-self-determinism nokuzethemba.
Okunye okumele ukukhumbule ukuthi lapho unikeza ingane okuthile, ngeyakhe. Akuseyona eyakho. Ngeyakhe manje. Lokhu kufaka phakathi izingubo zakhe, amathoyizi negumbi lakhe. Lokho akunikiwe kumele kuhlale ngaphansi kokulawulwa nguye kuphela. Kungenzeka agcine ukuklebhula ihembe lakhe, elimaze umbhede wakhe noma aphule injini yakhe yomlilo wamathoyizi, kepha lokho akwenzayo ngempahla yakhe akusilo ibhizinisi lakho.
Ungathanda kanjani ukuba othile akuphe isipho sikaKhisimusi abese ekutshela, usuku nosuku, lokho okufanele ukwenze ngakho futhi aze akujezise uma wehluleka ukunakekela ngendlela umuntu akunikeze yona acabanga ukuthi kufanele inakekelwe ngayo? Ubuzophula leso sipho.
Ngakho-ke lapho uphazamisa impahla yengane, lokho ezoqala ukukwenza kungonakalisa izinzwa zakho. Lokho ukuziphindisela kwakhe. Uyokhala. Uzokuhlupha. Uzophula izinto zakho. “Ngokwephutha” uzophalaza ubisi lwakhe. Futhi, ngezinhloso, yena uzohlukumeza noma yini omninikeze yona bese umxwayisa ukuthi ayinakekele futhi angakwenzi lokhu noma lokho ngakho. Ngani? Ulwela ezakhe ne-self-determinism.
Ngakho-ke lapho unikeza ingane yakho okuthile, yazi ukuthi manje sekuyinto yayo.
ILungelo Lengane Lokufaka Isandla
Kufanele unikeze ingane yakho ilungelo lokufaka isandla.
Noma yimuphi umuntu unomuzwa wokuthi uyakwazi ukwenza izinto, futhi azenze kahle, inqobo nje uma evunyelwe ukwenza izinto kwabanye noma okuningi kunalokho akwenzelwe khona.
Wena, njengomzali, uneqhaza ngokwemvelo enganeni yakho kunalokho yona enikela ngakho emuva. Umnika ukudla, indlu yokuhlala, izingubo, izincwadi, amathoyizi, imali nothando lwakho. Ngenkathi eseyingane, angeke akubuyisele okuningi njengoba umnika kona.
Lapho nje ingane yakho ibona ukuthi yona ithola okungaphezulu kwalokho ekubuyisayo, izobe ingajabule. Yena uzozama ukufaka isandla ngaphezulu. Kepha uma engavunyelwe, uzokuthukuthelela futhi angahle aqale ukungakuthandi.
Ngaphandle kokubona okwenzekayo, ungazama ukuphatha ukuvukela kwengane yakho (ukusabela ngokumelene negunya) ngokunikela okuningi kuye. Kepha okungenzeka lapho, ngoba manje akasakwazi ukufaka isandla kuwe njengoba umnika yena, ukuthi ingane yakho izovukela kakhulu. Uma lo mjikelezo uqhubeka, ingane yakho ingagcina ingasenandaba. Ngakho-ke kufanele uvumele ingane yakho ukuthi ikuxhase.
Kepha awukwazi ukumyalela ukuthi afake isandla. Awukwazi ukumyalela ukuthi agunde utshani ubize lokho umnikelo wakhe. Kufanele azitholele ngokwakhe ukuthi uyini umnikelo wakhe bese ewunikeza. Uma enziwe ukuthi enze okuthile ukufaka isandla, akazikhethelanga yena uqobo futhi akusikho okwakhe. Ukutshelwa okufanele akwenze ukufaka isandla kubonakala kuye njengokulawula okuningi okuvela kuwe.
Ngisho nengane iyasiza ngokuzama ukumomotheka. Ingane izobukisa. Lapho esemdala, uzokudansela. Uzokulethela izipho ezincane njengezinti ezithile azithole phansi noma itshe noma iqabunga. Yena uzozama ukuphinda imisindo oyenzayo ngezandla noma ngomzimba wakho ukukusiza lapho usebenza. Ukwenza isibonelo, uzozama ukukusiza ucindezele i-vacuum cleaner noma uvuse le ngxube esitsheni lapho wenza ikhekhe.
Uma ungemukeli iminikelo evela enganeni, njengokumamatheka, leyo midanso, lezo zinti, lezo zinhloso zomsebenzi, uzobe usuqalile ukumisa umnikelo wengane yakho. Futhi uma uyeka iminikelo yakhe, uzoqala ukukhathazeka. Yena uyokwenza izinto eziyinqaba empahleni yakho ukuzama ukuzenza “ngcono” kuwe. Isibonelo, anganquma ukuthi ukhaphethi ubukeka ungcono ngoyinki othile kuwo noma udonga lubukeka luluhle kakhulu ngomdwebo wekhrayoni kuwo. Kepha uma umthuka noma umjezisa ngokwenza lokho, kuyinto embi kakhulu ongayenza.
Mane nje uvumele ingane yakho ukuthi ifake isandla futhi konke kuzohamba kahle kakhulu.
Ukuqonda Ukuthi Umndeni Usebenza Kanjani
Ingane ingazi kanjani ukuthi kufanele ifakele ini isandla uma ingazi ukuthi empeleni usebenza kanjani umndeni wakho?
Ngenkathi kungekho ongakwenza ngaphandle kokwemukela ukumamatheka, imidanso kanye “nezipho” ezincane lapho ingane yakho isencane kakhulu, ngokushesha nje lapho ingaqonda khona, kufanele inikezwe lonke udaba lokuthi umndeni usebenza kanjani nokuthi umndeni uhlanganiswa kanjani.
Ungamchazela ukuthi umndeni yiqembu elincane elisebenza ngokubambisana ukusiza ukusinda kwamalungu alo ngalinye futhi lisizane ukuze likwazi ukwenza kangcono empilweni. Ungamchazela ukuthi isibonelelo sakhe sivelaphi. Ungamtshela ukuthi kwenzekani ukuze kube khona nokudla etafuleni wonke umuntu adle, lapho kuvela khona izingubo zakhe, okufanele ukwenze ukwenza indlu ehlanzekile nokuthi umndeni unemoto futhi ungayigcina kanjani ihamba.
Ubungamtshela ukuthi ubaba uyasebenza. Ubaba uchitha amahora amaningi esebenzisa izandla zakhe nokucabanga kwakhe ukusebenza kanzima futhi ngalokho uthola imali. Leyo mali isetshenziselwa ukuthenga ukudla enikudlayo nonke. Imoto iyabhekelwa, ngoba kubiza imali eningi ukubuyisela imoto. Ungachazela ingane ukuthi indlu ezolile nokunakekela ubaba kusho ukuthi ubaba usebenza kangcono, futhi lokho kusho ukuthi ukudla nezingubo nezimoto.
Ngamanye amagama, nikeza ingane yakho incazelo ephelele yazo zonke izinto eziphathelene nendlu, umsebenzi futhi idlale ngendlela ezoqonda ngayo.
Uma ingane yakho ibivukela, ingaqhubeka nokuvukela isikhashana. Kepha uma efundile emndenini futhi azi ukuthi yini enifuna ukuyenza nonke njengeqembu, ekugcineni uzokuqonda futhi abe yingxenye yomndeni futhi asebenzisane nani ukusiza wonke umndeni wenze kangcono kakhulu.